Lens Google: Muxuu yahay codsigan maxaase loogu talagalay | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Sawir
Google Lens waa mid ka mid ah barnaamijyadan ku soo badanaya Android, gaar ahaan maadaama ay ku habboon tahay taleefannada badan markasta. Marka lagu daro noqoshada barnaamij muhiim u ah istaraatiijiyada Google. Sababtaas awgeed, shirkaddu waxay muddo ka shaqeyneysay horumarro badan iyo shaqooyin cusub oo ka dhex jiray, qin aan awoodnay inaan aragno mararka qaarkood. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan barnaamijkan.
Waa maxay Lens Google iyo maxaan ku samayn karnaa codsigan Android? Tani waa waxa aan ka jawaabi doonno tan xigta, si aad u ogaato wax kasta oo codsigan noo oggolaado inaan sameyno, tan iyo tirada shaqooyinku way sii kordhayeen iyada oo waqtiga loo soo maro si la yaab leh.
1 Waa maxay Lens Google
2 Maxaa loo isticmaali karaa?
Waa maxay Lens Google
Google Lens waa codsi ay abuurtay Google. Waxaa hadda loo heli karaa labada Android iyo iOS. Waxay ku shaqeysaa iyadoo la adeegsanayo kaameradda taleefanka gacanta iyo waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado walxaha inaad hortiina haysato marwalba. Kaliya waa inaan farta ku fiiqnaa iyaga si markaa barnaamijku sidan u sameyn karo. Sababtoo ah adoo farta ku fiiqaya shay, waxaad bilaabi doontaa inaad falanqeyso oo aad garato waxa ku saabsan. Markaad ogaato waxa ay tahay, waxay ina siin doontaa tallaabooyin taxane ah oo la sameeyo.
Falalkani waxay kuxiranyihiin nooca shayga aan tilmaamnay leh kaamirada. Markaa hadday tahay warshad, qayb ka mid ah alaabta guriga ama qoraal, waxaan samayn karnaa tallaabooyin kala duwan oo la qabsan kara shaygan gaarka ah. Xaalado badan, waxaan u haysannaa in kabadan hal xulasho tan. Tani waa macquul sababtoo ah Google Lens wuxuu la falgalaa barnaamijyada kale ee Google, sida turjubaanka ama kaaliyaha. Sidan ayaan ugu isticmaali karnaa taleefanka.
Isku xirka Google Lens waa sida kamaradda taleefanka, in kastoo aan helnay wadar ahaan shan badhan. Bartamaha badhan otomaatig ah, oo lagu falanqeynayo sawirrada. Dhinacyada waxaan ku leenahay laba badhan, oo loo adeegsado kiiskan baaritaanno gaar ah ama ficillo lagu fulinayo shayga su'aasha aan ku falanqeynay barnaamijka.
Maxaa loo isticmaali karaa?
Liiska shaqooyinka aan u isticmaali karno Google Lens muddo ka dib ayey sii kordheysay. Wax badan ayaan ku qaban karnaa arjigan ku saabsan Android, marka lagu daro xaqiiqda ah inay si fiican oo ka sii fiican u shaqeyso. Hawlgalkeeda si weyn ayaa loo hagaajiyay, taas oo shaki la'aan ah mid muhiim ah. Kuwani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan sameyn karno:
U turjun qoraallada waqtiga dhabta ah markaad ku tilmaanto iyaga barnaamijka
Macluumaad ku saabsan buug: Markaad tilmaamayso buug, Google Lens wuxuu ka raadin doonaa wax aan la taaban karin, dib u eegis iyo xiriirin raadinta Google
Eray raadin: Markaad falanqeyneyno qoraalka waxaan gujin karnaa ereyo gaar ah oo aan ka raadin karnaa Google
Ku dar dhacdo kalandarka
Haddii aan tilmaanno lambar taleefan waan awoodnaa toos u wac
Nuqul qoraalka waqtiga saxda ahXulashada ereyada ka sokoow waxaan dooran karnaa qoraal dhan waxaanan ikhtiyaar u leenahay inaan koobiyeynno
Macluumaadka ku saabsan xayawaanka ama ubaxa: Markaan farta ku fiiqo iyaga, Google Lens ayaa noo sheegi doonta fasalka ama jinsiyada waxayna na siin doontaa marin macluumaad dheeraad ah
Haddii aan ku suganahay makhaayada horteeda, waxaan ka akhrisan karnaa dib u eegista ku saabsan intaas marka lagu daro si ay u awoodaan inay falanqeeyaan menus isla (waxay soo bandhigi doontaa sawirro iyo macluumaad iyaga ku saabsan)
Ka hel alaabada khadka tooska ah si aad ugu iibsato: Haddii aad tilmaantid shay gaar ah, waxaad ka raadin kartaa dukaanka internetka wakhti kasta
Kudar xiriirada kaarka ganacsiga haddii aan ugu tilmaamno Google Lens
Kuwani waa qaar ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee aan ku raaxeysan karno barnaamijka ku jira Android. Marka waa barnaamij soo bandhigaya fursado badan oo macquul ah. Waxaan ku soo dejisan karnaa bilaash taleefankayaga Google Play, marka lagu daro inaanad lahayn xayeysiis. Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa xiriiriyahan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Waa maxay iyo waxa aad ku samayn karto Google Lens
Google Drive hadda wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kaydiso faylasha qadla'aan